uyilo Lwegumbi Lokuhlambela | Eyekhala 2022
Iingcamango zokuLungisa iiNdlu zokuhlambela (Isikhokelo sokugqibela)
Ezi zimvo zoluhlu lweendawo zokuhlambela ziya kukunceda ufumane elona xabiso liphindaphindayo lokuyila kwiprojekthi yoyilo. Fumana iingcebiso ezilungileyo zokulungisa kwakhona igumbi lokuhlambela uyilo oluhle
I-137 yoyilo lweGumbi lokuhlambela (Imifanekiso yeeTub kunye neMiboniso)
Isikhokelo sokugqibela sezimvo zoyilo lwegumbi lokuhlambela. Jonga imifanekiso yoyilo lwangaphakathi olubonisa amagumbi okuhlambela anamhlanje, anamhlanje, ngokwesiko kunye nokunethezeka. Ukubonisana nabaqulunqi bangaphakathi abaphezulu ngokugxininisa kwiimpawu zokugqibela ezinje ngetayile yesiko, iibhafu ezinkulu zokuntywila, kunye nemvula emanzi.
Iingcinga zeGumbi lokuhlambela elincinci (Ilize, ukuGcina kunye noYilo loyilo)
Igalari yezimvo zangasese ezincinci. Fumana imibono yoyilo lokuhombisa igumbi lokuhlambela, amampunge, iisinki, kunye nokugcina ukuze wenze indawo oya kuyithanda nosapho lwakho.
Ukuhamba ngeenyawo ezingama-63 kwimiboniso (iZimvo zoyilo)
Nantsi igalari yethu yokuhamba ngokunethezeka kwimvula kunye nemibono emihle yoyilo. Yiba nomfanekiso-ngqondweni wakho uphumle kwezi zihlambi zinobunkunkqele kwaye ufumane eyona uyithandayo
Ukulungiswa kweeshawa zemarble kunye neengozi malunga nokuba yintoni, indleko, imibuzo edumileyo kunye nendlela yokucoceka. Fumana izimvo zeeshawari zokuhlambela izitya zemabula.
Umgangatho weVinyl kwiipropati zeGumbi lokuhlambela kunye neNgxaki
Umgangatho weVinyl kwindlu yokuhlambela kunye nokuxhamla ngeentlobo ezahlukeneyo kwaye loluphi uhlobo olulungele uyilo lwakho lwangaphakathi. Jonga izimvo zaphantsi zewayini zangasese
Imvula kunye neengozi zayo
Intloko yeshawa yemvula yokuhlambela ilungile kunye neengozi kunye neempawu, ezigqityiweyo kunye nokuphakama kangakanani ukuxhoma. Jonga ukuba intloko yeshawari yemvula ilungele uyilo lwakho.
Iinqanawa zeSinks Pros and Cons (yoyilo lwegumbi lokuhlambela)
Isikhephe sitshona kulunga kunye nengxaki yokuqwalaselwa koyilo kunye neempendulo kwimibuzo edumileyo. Jonga ukuba izitya zokuhlambela izitya zilungele ikhaya lakho.
I-Quartz Shower Walls Pros kunye ne-Cons
Iindonga zeeshawari zewartz zilungile kwaye zenzekile zigubungela ukuzinza, ukugcinwa kunye noyilo. Jonga ukuba isitya sokuhlambela sequartz silungele ikhaya lakho.
Iinkonzo kunye neengozi zeCorian Shower Walls
Isikhokelo kwiingenelo kunye neengozi zeendonga zeshawari zaseCorian kubandakanya indleko zazo nokuba zilukhetho olufanelekileyo kuyilo lwakho lokuhlambela.
Ithuba leCopper (Isikhokelo sokuthenga)
Isikhokelo sokuthenga ityhubhu yobhedu kwiindidi ezithandwayo, imibuzo eqhelekileyo kunye neenzuzo kunye neengozi. Jonga imifanekiso yoyilo lokuhlambela ngeebhafu zokuhlambela.
Isoftware yokuLungisa i-Bathroom eyi-10 (yasimahla kunye neNtlawulo)
Ngesoftware yokulungisa indawo yokuhlambela ungakhetha isicwangciso sakho somgangatho, wenze uyilo olugqibeleleyo, ungeze izixhobo kwaye ubone ngeprojekthi yakho yokuhlambela egqityiweyo. Ezi nkqubo zokulungisa izindlu zangasese azibizi kwaye ngoku kulula ukuzisebenzisa kunangaphambili. Ngezantsi zi-10 zeenkqubo zesoftware yokuhlaziya yangasese onokuzisebenzisa ukwenza ngokukhawuleza uyilo olulungele wena.
Imigangatho yeshawari yokuhlamba (Iinkonzo kunye neNkcitho kunye neeYilo zangasese)
Isikhokelo sokuya kwi-teak floor floor kunye nokuba yintoni kunye nokulunga kunye nokubi kwayo. Fumanisa ukuba i-teak flooring yomthi ilungele uyilo lwakho lokuhlambela.
Ukufudumeza ithawula ukufudumala kunye neeRack Ideas
Ukufudumeza itawuli kushushu kunye nemibono yokubeka. Jonga isitebhisi seladi, inkululeko, ikhabethe kunye nebhakethi kushushu ukufudumeza itawuli kunye nokomisa iiracks kwindawo yakho yangasese.
Iindidi zeethayile zangasese
Iindidi ezidumileyo zeethayile zangasese kubandakanya imifanekiso yomgangatho kunye nodonga lwethayile, iingenelo kunye nokubi kunye nemibono yoyilo. I-Ceramic, i-porcelain, i-mosaic kunye nelitye lendalo ziphezulu
Iingcamango zeTile zeGumbi lokuhlambela (Imifanekiso yoyilo)
Igalari yemibono yethayile yegumbi lokuhlambela kunye nemifanekiso kubandakanya izinto ezahlukeneyo ezifana ne-ceramic, porcelain, slate, granite, vinyl, linoleum kunye nemarble.
Isikhokelo sokuyila iMarble kubandakanya ubuhle kunye neengozi, kunye nendlela yokunyamekela eli litye lihle. Jonga iindawo ezivaliweyo zeshawa lemabhile, iithayile kunye nemoses.
Uyilo lweNdlu yangasese eNtofontofo (Icandelo 2)
Igalari yoyilo lweengcinga zangasese ukudala eyona ndawo ingcwele yakho. Nokuba uyakuthanda ukungena ebhafini, okanye ukonwabela ubunewunewu bemvula eshushu ezi deigns zikunikezela ngento ethile. Le yinxalenye yesi-2 kwigalari yemifanekiso emi-3. (Cofa apha ukuze ufumane iiNdawo zoYilo lweGumbi lokuhlambela Icandelo 1 kwaye apha uyilo lweGumbi lokuhlambela Icandelo 3)
Iingcamango zoyilo lwegumbi lokuhlambela (Icandelo lesi-3) zale mihla, zale mihla kunye nezeMveli
Uyilo lwegumbi lokuhlambela elinemibono. Inamaxesha okuhlambela okwangoku, okwangoku kunye nemveli kunye neethayile ezahlukeneyo zomgangatho kunye nodonga, iibhafu kunye neeshawari zokukunceda ufumane isitayile esikulungele.
Iingcamango ezi-15 eziMnyama neziMhlophe zeGumbi lokuhlambela (Imifanekiso yoyilo)
Le galari yezimvo zangasese ezimnyama nezimhlophe zibonisa uyilo kwiindlela ezahlukeneyo. Xa uhombisa igumbi lakho lokuhlambela ngombala omnyama nomhlophe ngaphandle kokungenisa elizweni ukwenza ibhalansi elungileyo ukuqinisekisa ukuba igumbi alikho mnyama kakhulu okanye aloyiki kwiimvakalelo. Nazi ezinye zeendlela ezithandwayo zokuyila zangaphakathi ezisebenzisa umbala omnyama nomhlophe onemixholo yokwenza izindlu zokuhlambela ezimemayo.
iindawo zokutshata emissouri
Imiyalezo yamakhadi omtshato engahluthisiyo
Uyilo lwekhitshi labapheki
unxiba ntoni umama womtshakazi
iilokhwe zabafazi abanokuzinxiba emtshatweni